डोमेन नाम के हो र किन यो यति महत्त्वपूर्ण छ?
आफ्नो कम्पनी को लागि आफूलाई वा आदेश अनलाइन स्रोत लागि साइट सिर्जना गर्ने, साथै नेटवर्क यसको पदोन्नति लागू गर्ने प्रयास संलग्न छ जो सबैलाई थाह - वेबसाइट डोमेन चयन - यो एक कठिन र जिम्मेवार कार्य हो। यो कारणले गर्दा पनि एक ठीक बनेको संग साइट गुणात्मक डिजाइन जसमा मामिलामा यस अवस्थामा छ जनक कर्नेल, यसको मालिक डोमेन को भूमिका बुझ्न छैन भने साथै उच्च गुणवत्ता र मूल सामग्री, सफलता हुन सक्दैन। डोमेन के हो पदोन्नति को पक्ष मा? निस्सन्देह, एउटा महत्त्वपूर्ण कारक निकै विकास को सफलता र इन्टरनेट स्रोत को उपस्थिति प्रभावित।
प्रश्न यो डोमेन कि - यो निर्णय गर्ने मान्छे जो दर्ता साइट आवश्यक इन्टरनेट, तिनीहरूको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न के संग पहिलो भेट हो। स्पष्ट यो अवधारणा महत्त्व साकार, एक इच्छुक इन्टरनेट व्यवसायी यो एक राम्रो विकल्प र अद्वितीय डोमेन छ, र उचित दर्ता सफलता गर्न मौलिक भनेर बुझ्छ। अन्य कुराहरु, दायाँ, र एक निश्चित गणना कन्फिगर डोमेन चयन भविष्यमा साइट मालिक र वेबमास्टर लागि जीवन सजिलो, स्रोत को तीव्र र सफल विकास को बढावा योगदान बनाउँछ।
त्यसैले एक के हो डोमेन। डोमेन (डोमेन नाम) प्रतीकात्मक नाम भनिन्छ, एक उद्देश्य गर्दछ जो - पहिचान क्षेत्रहरु - प्रशासनिक स्वतन्त्रता, इन्टरनेटमा विभाजित छ जो एकाइहरू। डोमेन नाम सर्भर - DNS मा प्रदान वैश्विक नेटवर्क मा डोमेन नाम को एक साधारण स्पेस काम। डोमेन नाम सम्भव मानव धारणा लागि सुविधाजनक फारम तिनीहरूलाई (ई-मेल सर्भर, वेब साइटहरु, र अन्य सेवाहरू) मा राखिएको छ भनी इन्टरनेट साइटहरू, र नेटवर्क स्रोतहरू को सम्बोधन लागू बनाउँछ रूपमा यस्तो कुरा को अस्तित्व छ।
बस डोमेन नाम, साथै हाइरार्खीमा उच्च हो कि सबै डोमेन नाम - FQDN धेरै भागहरु, डट्स द्वारा विभाजित को अभिलेखमा मेल खाने। यो एक अर्को हुन्छन् रूपमा अर्थात् डोमेन। उदाहरणका लागि, FQDN ru.name.org मतलब वर्तमान डोमेन नाम तेस्रो स्तर RU, दोस्रो स्तर नाम समावेश गर्ने, बारी मा, माथि स्तर org पर्छ। दैनिक बोली अक्सर, शब्द डोमेन नाम यो एक पूर्ण योग्य डोमेन नाम हो सुझाव।
डोमेन क्षेत्र एक निश्चित स्तर द्वारा विशेषता नाम को एक सेट, भनिन्छ। उदाहरणका लागि, क्षेत्र mysite.org। यो कि डोमेन स्वामित्वको, तेस्रो स्तर प्रत्येक को नाम समावेश छ। यस्तो नाम को उदाहरण सेवा गर्न सक्छन् name1.mysite.org, name2.mysite.org आदि
निस्सन्देह, लोकप्रिय र सरल नाम www.auto.ru जस्तै, वा आफ्नो मालिक एक विशाल उपस्थिति ल्याउन www.job.ru र वाहेक resell धेरै लाभदायक हुन सक्छ।
तपाईं आज यी नामहरू लगभग कुनै हो बुझ्न छन् - लामो समय केही साइटहरु लागि सुरक्षित लागि सामान्यतः प्रयोग शब्द, वा डोमेन नाम रिसेलिङका मा कमाउन गर्ने व्यवसायी स्वामित्वमा छन्। अब हामी एक सफल इन्टरनेट दिग्गज स्वामित्वमा नाम, केही milozvuchnostyu विशेषता छैन भनेर बिर्सनुभयो वा कुनै पनि शब्द व्यापक प्रयोग मेल हुँदैन। वास्तवमा, ल्याउन तथापि, हस्तांतरणीय छैन र शब्द इङ्गित गर्दैन, आफ्नो मालिकहरूको लागि करोडौं डलर - हामीलाई सम्झन को «Yandex», «Rambler» वा «गूगल» गरौं।
यसलाई त्यसैले निराश आवश्यक कारण ठेगानामा पट्टी हेर्न चाहनुहुन्छ कि नाम, बस सरल सुझाव पालना बस के बन्द देखाउन छैन भन्ने तथ्यलाई छ:
1 नाम अद्वितीय र उच्च मनमोहक अरूलाई विपरीत, हुनुपर्छ
2. धेरै लामो नाम प्रयोग नगर्नुहोस्
3. एक भौगोलिक स्थान भविष्य साइट, यसको डोमेन नाम दर्शक स्रोत सामग्री निर्देशित छ जसमा राज्य को क्षेत्र मा समावेश हुनुपर्छ भने।
हामी आशा माथि डोमेन र कसरी आफ्नो विकल्प खेती कुरा बुझ्न मदत गरेको छ।
डोमेन नाम सिस्टम - इन्टरनेटमा कामकाज को 'को जगको'
डोमेन, हुलाक कार्यालय र यसको आकार लागि सेवाहरू
Yandex मा डोमेन delegating
को RuNet के हो?
"गरिब Liza": कथा बारेमा टिप्पणी
डिस्कहरूको लागि डिस्क जाँच गर्दै
वजन "Dietstressa" को लागि औषधि: समीक्षा र सञ्चालनको सिद्धान्त